Su'aal: Kabooobyada dhinaca bidixda?
Author Topic: Su'aal: Kabooobyada dhinaca bidixda? (Read 2348 times)
« on: July 20, 2016, 10:11:40 PM »
Asc wan idin salamay dhakhatiirta sharafta leh waxan raba inad iga. Jaahil saartan kabooobyo dhinaca bidix da ah oo anan u seexan karin waxad mooda. In. Dareenku ka tagayo baabacada gacanta gabi dhinaca bidixdu way kaboobyonaysa asc
Re: Su'aal: Kabooobyada dhinaca bidixda?
« Reply #1 on: September 16, 2016, 09:06:32 PM »
Kabuubyada waxay tilmaan u tahay cillad neerfaha, haddii aad ka dareemayso calaacasha hal gacan waa in la fiiriyaa neefaha kalagosyga gacataada, haddii ay ilaa xusulka soo gaarsiisan tahayne waa in la fiiriyaa neefaha qoortaada, fadlan la xiriir dhakhtar aqoon u leh xanuunada neerfaha.
Su'aal: Waxaa i qabta xanuun dhinaca bidix ee feeraha?
Started by KatraBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4935 February 08, 2016, 04:03:57 PM
Views: 4392 December 02, 2017, 09:06:39 PM
Su'aal: Waxaa in mudo ah i xanuunaya dhinaca midig?
Views: 3660 February 10, 2016, 02:19:32 PM
Su'aal: Waxa i xanuuno dhinaca midig ee feeraha?
Started by MaimunakhalifBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4856 April 24, 2016, 04:17:20 PM
Su'aal: dhinaca midigta ayaanan u seexan karin?
Views: 24827 April 24, 2016, 02:22:02 PM